Kindle တွင် Unicode ထည့်နည်း
By Htet Wai Aung - May 14, 2020
■ Kindle Reader များတွင်ယူနီကုဒ်ဖတ်၍ရအောင်ပြုလုပ်ခြင်း■
Software3ခုလိုပါတယ်။
၂။ Kindle Previewer 3
၃။ KFX zip
တို့လိုပါတယ်။ ပထမအဆင့် Kindle Previewer3ကိုသွင်းပါ။ ပြီးရင် calibre မှာ KFX plug in ကိုသွင်းပါ။ ပြောင်းချင်တဲ့စာအုပ်ကိုCalibre ထဲထည့်ပြီး .KFX သို့ ပြောင်းပါ။ စက်ထဲထည့်ပါ။ Kindle မှာ ဖောင့်ကို ပြည်ထောင်စုချိန်းလိုက်ပါ။ ရသွားပါပြီ။ အားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေဗျာ။
■ Kindle Previewer3■
Previewer3 ကိုသွင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က Calibre မှာ KFX ကိုပြောင်းတဲ့အခါ Fail မဖြစ်ရအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
■ KFX plug in.zip ■
မှတ်ချက်။ စက်ထဲမှာ ပြည်ထောင်စုဖောင့်ရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ ပြီးရင် စာအုပ်ကို ဖောင့် 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 ထဲမှာပြည်ထောင်စုရွေးပေးရပါမယ်။ ဖောင့်မထည့်တတ်ပဲရှိခဲ့သော် ဒီမှာကြည့်ပါခင်ဗျ။
ခက်ခဲလွန်းတယ်လို့ထင်ရင်ကြည့်ဖို့ပါ။ တူတူပါပဲ။ Video Version ပေါ့ဗျာ။
■ Special Thanks to mobile-read forum.■
Zawgyi နဲ့ Unicode က စာဖတ်ရင် တော်တော်သိသာပါတယ်။ Unicode မှာ စာလုံးတွေကွဲနေ ပြတ်နေတာ မရှိတော့ ကြည့်ရတာ အတော်စိတ်ချမ်းသာတယ်။ ဒီပုံ ၂ ပုံကို ကြည့်ရင် သိသာပါတယ်။
ဒါကတော့ Unicode ပါ။ အပေါ်က ဇော်ဂျီမှာ "လူတိုင်း" ဆိုတဲ့စာလုံးမှာ "တို" ကအပေါ်မှာ ကျန်နေခဲ့ပြီး "င်း" က အောက်တစ်ကြောင်းကို ဆင်းသွားတာ တော်တော် ကြည့်ရ အဆင်မပြေတာပါ။
Unknown January 13, 2022 at 12:40 AM
my kindle doesn't support KFX. any idea to read in unicode, zawgyi font install is fiine but can't get uni on my device.
My Media Server Set Up
YouTube alternative Mi TV